मशरूम - एक उत्पादन को बजाय असामान्य, तर स्वादिष्ट र उपयोगी। केही मानिसहरु मशरूमबाट पकाउने छनौट गर्छन्, अलि शरद ऋतुको बिहानको छेउमा जंगलमा एकत्रित। र अरूले यस रोमान्टिकवाद त्याग्नु र उनको पाक कलाकृतिहरू सबैभन्दा नजिकको सुपरमार्केटमा किनेका लागि विजेताबाट तयार पार्छन्। तर पहिलो र सेकेन्ड दुबैमा समान छन्। उत्तम विकल्प छ कि मशरूम कुकुर क्रीममा पकाउनुहोस्। यो कसरी गर्ने, र यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
द्वारा र ठूलो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छैन कि किस प्रकार को मशरूम पकाउने - खट्टा क्रीम संग लगभग सबै लोकप्रिय र हाम्रो प्रजातान्त्रिक हुन्छन्। सम्झनुको मुख्य चीज भनेको हो कि यदि तपाई तिनीहरूमा राम्ररी बुझ्न र आफ्नो मशरूम तयार गर्न तयारी गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो हान गर्न र अधिक अनुभवी मशरूम पिकरसँग परामर्श गर्न राम्रो छ, किनकि तपाईंको "फसल" खाने वा खतरनाक र जहरीला हुन सक्छ।
स्टुड मशरूम खाना पकाउने सरल उपाय मशरूम हुन सक्छ - तपाईले उनीहरूलाई कुनै समस्या बिना किन्न सक्नुहुनेछ, र उनीहरूको स्वाद र तयारीको सहाराले तपाईंलाई बेवास्ता गर्दैन। मशरूम खट्टा क्रीममा, जो कि नुस्खा चयनित मशहूर किसिमको आधारमा, धेरै फरक छैन, धेरै छिटो पकाउन सकिन्छ। यसका लागि हामीले एक किल च्याम्पियनहरू, नमक, काली मिर्च, थोडा मक्खन, आटाको चम्मच र आधा गिलास खट्टा क्रीमको खाँचो पर्छ।
राम्रो तरिकाले क्रमबद्ध, सफा र धोएको मशरूम, र त्यसपछि उबलती पानीमा5देखि6मिनेट सम्म पकाउनुहोस्। यदि चाहियो भने, मशरूम एक पानीमा पकाउन सकिन्छ, तर तिनीहरूलाई एक कलरडरमा राख्नुहोस् र प्रक्रियाको बीचमा पानी परिवर्तन गर्नुहोस्। मशरूम लगभग पकाएको पछि, तिनीहरूलाई तनाव र ठूलो स्लाइसमा काट्न पछि। एक राम्रो फ्राइङ प्यान मा दुई चम्मच मक्खन (यदि आवश्यक भएमा, तपाईं थोडा थप थप्न सक्नुहुन्छ), र त्यसपछि मशरूम, पूर्व नुन र मरिच राख्नु। पन्ध्रस बीस मिनेट पछि, प्यान को सामग्री को लागि एक चम्मच आटा र खट्टा क्रीम जोड्नुहोस। सुस्त आगोमा पकाएर मशतीमा खट्टा क्रीम ल्याइदिन्छ।
तर यदि तपाइँ धेरै सामग्रीहरूसँग पकाउनु हुन्छ वा यस प्रक्रियामा अतिरिक्त अवयवहरू समावेश गर्दछ भने, खट्टामा कचौरामा सुशील मशरूम अझै पनि एक घण्टा भन्दा कमको लागि तैयार रहनेछ। उदाहरणको लागि, निम्न अनुशासनलाई विचार गर्नुहोस्।
हामीलाई आधा किलो किन्नका चैंपियनहरू, एक गिलास खट्टा क्रीम, पचास ग्राम कडा पनीर, एक मध्यम प्याज, दुई ताजा टमाटर, र स्वादको लागि मसाले चाहिन्छ। मशरूम र सब्जिहरु यो धोए हुनुपर्छ, र त्यसपछि साना टुक्राहरु मा काट। पहिले गर्म फ्राइङ प्यान फङीमा राख्नुभयो र, कहिलेकाँही घिमिरे, उनीहरुले कम्तीमा एक घण्टाको लागि कम गर्मीमा ठोक्छन्। त्यसपछि प्याज थप्नुहोस्, र थोडा पछि खट्टा क्रीम। अब हाम्रो भान्सा नमकीन र मरिच गर्न सकिन्छ। जब खट्टा क्रीममा मशरूम धीरे-धीरे चिसो हुन्छ, कटा टमाटरहरू फ्राइङ प्यानमा र स्टाउको पाँच मिनेटको लागि स्टाउ लगाउनुहोस्। मेजमा तिनीहरूलाई सेवा गर्नु राम्रो तरिकाले पकाउने पछि, र सेवा गर्नु अघि, ग्रेटेड पनीरसँग छिटो र सागको साथ सजावट।
जब खट्टाको क्रीममा मशरूम तयारी गर्दै, यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यी उत्पादनहरू पुरा तरिकाले विभिन्न सागहरूसँग संयुक्त हुन्छन्। परम्परागत अजफ्ती, हरियो प्याज वा डिल, र धेरै भान्साहरूमा बढी "विदेशी" को रूपमा उपयुक्त, अजवालीका पत्ते, धनी, लसुनको लसुन र भित्री भाग पनि। मशरूम को धुन संग संयोजन मा, खट्टा क्रीम र मसाले को हल्के स्वाद, ग्रीस केवल तैयार डिश को पैलेट को पूरक गर्दछ र यसलाई ताजाता र मौलिकता दिनुहोस।
कुनै पनि डिश को अर्को विशेषता, खट्टा क्रीम संग मशरूम को एक जोडी मा आधारित छ - यो खाना एक ताजा रूप मा तालिका मा सेवा गरिरहेको छ। यदि तपाईं मशरूम ठोक्नुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई पुन: दोहोर्याउनुहोस्, डिशको स्वादले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्छ। यस मामला मा अपवादहरु मशरूम संग सलाद हो, जो मेज मा भरिएको छ।
जामबाट जाम कसरी गर्ने? अदरकको थपसँग एक नुस्खा
पेसाला फलफूल र सब्जिहरु को लागि ड्रायर मा
एक शाही तरिका मा लीभर: हप्तामा, र छुट्टी मा
स्वादिष्ट र संतोषजनक julien: मशरूम र खनिज मासु संग नुस्खा
चिकन स्किभर्स: स्टालिकिक किन्सिशियेव को लागि नुस्खा
दुष्ट हुन् र तिनीहरूले हेर्न कसरी?
हाइड हीरो शुल्क: प्रवाह र Cheats
भूल-मलाई - इतिहास संग फूल
कसरी ताजा आटा तयार
जल टावर: सञ्चालनको उद्देश्य, उद्देश्य, विशेषताहरू
Daria Shpalikov: सोभियत अभिनेत्री को कठिन भाग्य
पुरुष केश poluboks। यसको लोकप्रियता को रहस्य के हो?
कोइला र सुनको निकासी लागि दुनिया मा गहिरो मेरो
ध्वनि: हास्य, मूल को इतिहास, प्लट को विकास